Eyona midlalo mihlanu ilungileyo yesikhephe ye-Android | I-Androidsis
UAron Rivas | 29/05/2021 21:15 | Ukuhlaziywa ukuba 29/05/2021 21:19 | Izixhobo ze-Android, Imidlalo ye-Android
Amaphenyane yenye yeendlela ezinomtsalane kwezothutho kubalandeli bolwandle, ukuhamba ngomkhumbi kunye… nabadlali, ewe! Kwaye kukho imidlalo emininzi ye-Android ethi, ukongeza ekubeni zezona ndidi zikhutshelweyo kwiVenkile yeGoogle Play, zezona zidume kakhulu kwaye zidlalwayo.
Kwabo balandeli bemidlalo yesikhephe kwiifowuni eziphathwayo, esi sithuba senzelwe bona, kwaye ukuba ucinga ukuba uyinxalenye yezi zinto, ukwindawo efanelekileyo. Ukuba akunjalo, kusenokwenzeka ukuba ezinye zezi zihloko zilandelayo sizidibanise ngezantsi zikuthandile, kuba ngeli xesha sidwelisa Iimidlalo ezi-5 eziPhezulu zePhenyane ze-Android Smartphones, ke kufanelekile ukuzama.
Phantsi uya kuzifumana ngaphambili Eyona midlalo mihlanu mihle ye-Android. Zonke ozifumanayo kule posi yokudibanisa zisimahla. Nangona kunjalo, enye okanye ezingaphezulu zinokuba nenkqubo yentlawulo encinci encinci yokufikelela kumxholo wepremiyamu, onokuthi ubandakanye amanqanaba amaninzi, iindlela ezahlukeneyo zomdlalo, imivuzo, amabhaso, kunye nokunye. Ngoku ewe, masifike kuyo!
1 Ilizwe lamaNqanawa emfazwe
2 IMFAZWE YEMFAZWE: Imfazwe yesibini ye-3D
4 Izibuko Lolwandle: Yakha izixeko kunye neenqanawa kwiSimulator
5 I-Hooked Inc: UFisher Tycoon
Ilizwe lamaNqanawa emfazwe
Ukuba amadabi ayinto yakho, kunye nesenzo, ukulwa kunye nemidlalo yempambano, iWorld Warships Blitz ngumdlalo oqinisekileyo ukuba uyawuthanda. Kwaye le nto ilandwe kakhulu kwaye ithandwa kakhulu kwisikhephe umdlalo ayingowona waziwa kakhulu ngohlobo lwayo; ukuqala, Inomxholo osikhumbuza umdlalo webhodi kunye nomdlalo bhanyabhanyaKwimeko apho lo mdlalo wesikhephe we-Android ubeka khona, kuya kufuneka wenze iimfazwe ezininzi zomkhosi wamanzi kwaye ubonakalise ukuba ungoyena ulwandle ulungileyo.
Ngokuqinisekileyo ukufunda okanye ukuva igama lalo mdlalo kuzisa engqondweni iPC eye yaphumelela ukususela oko yasungulwa, kwaye kunjalo Ilizwe leenqanawa zemfazwe. Njengedatha ekufuneka ithathelwe ingqalelo, iWorld Warships Blitz isekwe ngokufanayo, Ke izinto eziguqukayo ziyafana kakhulu, kodwa, ewe, zilungelelaniswe neefowuni eziphathwayo.
Ngalo mdlalo wesikhephe uya kuba nakho ukungena Imfazwe yaselwandle iiNangona kufuneka ugcine engqondweni ukuba uloyiso, kuya kufuneka usebenze ngokukhawuleza kunye nesicwangciso esiliqili. Sinki iinqanawa zeentshaba zakho kwaye uzame ukuphuma kwimilo ungonzakaliswanga kangangoko, njengoko ngakumbi nangakumbi uza kudibana neentshaba ezomeleleyo ezingazukuba lula ukohlula. Ungazithembi kwaye uzame ukufumana amava kumlo ngamnye.
Kuya kufuneka ubandakanyeke ngokupheleleyo kwiimfazwe ezintsonkothileyo ezi-7 vs 7 ezigcwele isenzo kunye nengozi, njengoko ingumdlalo wemfazwe. Hlanganisa iqela lakho kwaye uphelise abachasi bakho; Ungadlala kwiWorld Warships Blitz kwi-intanethi okanye ngaphandle konxibelelwano lwe-intanethi, ukuze uyidlale nanini na, naphi na, ngaphandle kwesizathu.
Kulo mdlalo wesikhephe Awuyi kufumana kuphela iinqanawa eziqhelekileyo, kodwa kuzo zonke iintlobo, ngaphezu kwayo nayiphi na imfazwe, ke uya kuba neentlobo ezininzi zeenqanawa zokulwa, abahamba ngeenqanawa, abatshabalalisi kunye neenqwelomoya. Kukwakho nemiboniso emininzi ukusuka kwiAtlantic, Pacific, naseArctic ukuya kumlo omkhulu waselwandle. Ngokulandelayo, unokukhetha kwaye utshintshe phakathi kwezixhobo ezininzi, nganye intshabalalo kunenye.
Kwelinye icala, kunzima ukuba udikwe yile game yesikhephe, kuba zininzi iindlela zomdlalo onazo kwaye unemishini emininzi yokwenza, ke unezinto ezininzi zokuziphazamisa kwaye uzonwabise. indlela.
Umthuthukisi: Iqela lemfazwe
IMFAZWE YEMFAZWE: Imfazwe yesibini ye-3D
Lo ngomnye umdlalo owabelana ngomxholo ofana kakhulu neBlack yeWarships Blitz. Ngumdlalo wemfazwe nesicwangciso ekuthi, kungenjalo kungenjalo, iinqanawa zezona ziphambili, kuba iimeko ezifanayo ziselwandle, nto leyo esenza ukuba sibe neemfazwe ezixabisekileyo zomkhosi waselwandle, kunye nemizobo engumona weminye imidlalo emininzi kudidi lwayo. Oopopayi bakwangumbono owomeleleyo kwesi sihloko, kunye nengoma yaso, kodwa eyona nto intle kakhulu kukuguquguquka komdlalo.
IMFAZWE YOKULWA: I-3D iMfazwe yesibini yeHlabathi ngumdlalo we-3D Isekwe kwixesha le-WWII. Kungenxa yoko le nto iimfazwe zingabonakali ngokungabikho kwesi sihloko, iimfazwe kunye nokulwa ukuba nothando olukhulu kunye nokutshabalalisa naphina apho kubonwa khona.
Kuya kufuneka uphumelele kulo lonke ungquzulwano, uzikise iinqanawa kunye nabasebenzi beqela elichasayo ngalo lonke ixesha, uzama ukungachaphazeleka okanye, kwiimeko ezintle, ungaphazanyiswa kwaphela. Ewe kunjalo, gcinani engqondweni ukuba akukho lula ukuphumelela kule mfazwe kunye nesicwangciso seqhinga.
Ungasebenzisa iinqanawa ezininzi zemfazwe, iinqanawa kunye namaqonga ekulweni, kunye nezixhobo zokuphumelela. Uya kuzifumana ujongene neziqendu kunye nemisebenzi ekufuneka uyenzile, zonke zisuselwa kumxholo wamandulo weMfazwe yesibini yeHlabathi. Kwakhona, ungawudlala lo mxholo wenqanawa kunye okanye ngaphandle konxibelelwano lwe-intanethi, olwenza ngcono nangakumbi.
Umthuthukisi: IJOCC Corp.
Sele sishiye into encinci yomxholo wamadabi aselwandle kwiMfazwe yesibini yeHlabathi kunye nezo mbambano zidlulileyo phakathi kwamazwe enkulungwane ephelileyo, sikubonisa kwiBattle Bay, yenye yezona midlalo zolonwabo nezonwabisayo onokuzifumana namhlanje kwi Dlala iVenkile yeefowuni ze-Android.
Kwaye into yokuqala ekufuneka siyibonisile malunga nesi sihloko kukuba inayo Umsebenzi omkhulu kwinqanaba loyilo, oopopayi kunye nemizobo. Apha sijamelene nemifanekiso yoopopayi kunye nemifanekiso engeyonyani, ekwabonakalaliswa kwimeko kunye neenqanawa ezininzi onokuthi uzisebenzise kulo mdlalo kwaye azikho kubomi bokwenyani, njengoko benoyilo olomeleleyo kunye nezixhobo ezintle kakhulu ejongeka ngathi yinto evela kwimovie yesayensi.
Unemikhumbi emininzi ongakhetha kuyo kwaye uqale idabi. Unayo ikhathalogu yezixhobo zokukhetha eyona ikuthandayo. Yilwa kwaye woyise iintshaba zakho, uzitshonise ezinzulwini zolwandle kumadabi omkhosi angazange abonwe. Unokuphakamisa umgangatho kwaye uphucule iinqanawa zakho, into eya kuba yimfuneko enkulu kakhulu ekujonganeni neentshaba eziya zisiba nzima ngakumbi nangakumbi. Baza kuzama ukukohlula, kwaye inkwenkwe ikulungele. Yilungele imfazwe kwaye ubonise ukuba ngubani owona mhle kunabo bonke kulo mdlalo wesikhephe we-Android.
Umthuthukisi: Iqumrhu lokuzonwabisa iRovio
Izibuko Lolwandle: Yakha izixeko kunye neenqanawa kwiSimulator
Izibuko loLwandle: Ukwakha izixeko kunye neenqanawa kwiSimulator kukulawulwa kwenqanawa kunye nesicwangciso-qhinga somdlalo we-simulator apho kuya kufuneka wakhe isixeko sakho kwisiqithi. Ngaba uyafuna ukuba yindawo yokuhambisa? Ewe, kulo mdlalo unethuba lokuba yinto enye, urhwebo kunye nokwenza ukusuka ekuqaleni nokwandisa izixeko ezikhulu. Isibhakabhaka ngumda, batsho, nangona kule meko ulwandle lukho.
Yakha kwaye ukhulise iinqanawa zakho zeenqanawa kunye nezikhephe kwihlabathi apho imizobo yenye yezona zibalaseleyo. Kuya kufuneka uphinde ulawule yonke imoto yakho, into engengomsebenzi olula, siyakuxwayisa. Funda okuninzi malunga nokuthengisa ngenqanawa, ulawulo lwezithuthi kunye nokwakha isixeko ngalo mdlalo we-simulator kwaye wonwabe apha endleleni. Bonisa abahlobo bakho ubuchule kunye nezakhono zeshishini esele kakhulu. Yakha ukuqala kwaye ulawule ukuhamba ngenqanawa, istamboat kunye neenqanawa zekhonteyina.
Kwelinye icala, ukuba uyayithanda imbali, ungathanda ukudibana nabalinganiswa bakudala abanjengoChristopher Columbus, Américo Vespucio nabanye abaninzi.
Umthuthukisi: Imidlalo yePixel Federation
I-Hooked Inc: UFisher Tycoon
Ukugqibezela ukudityaniswa kwemidlalo emi-5 yeefowuni zeefowuni ze-Android, i-Hooked Inc: I-Fisher Tycoon yeyona siyikhethileyo njengendawo efanelekileyo yokugqibezela okanye, ukuba ukhetha i-cherry kwikhekhe.
Incamathele kwi-Inc: I-Fisher Tycoon ngumdlalo wenqanawa opopayi we-cartoony, nangona kungengobunewunewu ukubona, inemizobo eyenziwe kakuhle, eyenze ukuba isihloko sibe nokuduma okubalulekileyo kwaye sikhulu. Kwaye, embuzweni, sijamelene nomdlalo, ongenanto kwaye akukho nto ingaphantsi, ukhuphelo olungaphezulu kwezigidi ezili-10, ngaphezulu kwesigidi esinye esinamakhulu amabini amawaka eembono kunye nenqanaba kwiVenkile yokuDlala yeenkwenkwezi ze1, eyenza ukuba ibe yenye eyona midlalo ikhutshelweyo kwaye idlalwe evenkileni.
Umxholo ulula, kodwa uyathandeka. Kuya kufuneka wenze iinqanawa kunye nabasebenzi, emva koko ulobe elwandle. Kukho iintlanzi zazo zonke iintlobo, ukusuka kwezona zixhaphakileyo ukuya kwezona zibalaseleyo kwaye zingaqhelekanga, nangona kungelulanga ukuzibamba, kwaye nangaphantsi xa kukho imiqobo yazo zonke iintlobo ezibandakanya iminenga kunye nezilwanyana ezinkulu zaselwandle eziza kukuphazamisa Zonke iindleko. Njengoko uqhubela phambili, unokuvula iintlobo ezintsha, zikwenze ukuba ugcine ukuloba kunye nokuloba kwisikhephe sakho.
Umthuthukisi: Ingonyama Studios
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Eyona midlalo mihlanu mihle ye-Android
Ezona zixhobo ziphambili zabantwana ze-Android